Noheverin’ireo malaso fa mitahiry volabe…: nokapain’ny dahalo antsibe ny loha sy ny lamosin’ilay mompera | NewsMada
Noheverin’ireo dahalo fa mitahiry volabe ilay mompera, ka izay no antony nanafihan’ny andian-dahalo nirongo fitaovam-piadiana ny trano nisy azy, ny alatsinainy lasa teo. Avotra soa aman-tsara ihany anefa ity mompera curé-n’ny Ekar Beraketa ity na teo aza ny ratra mafy nahazo.
Dahalo dimy lahy no tompon’antoka tamin’ny fanafihana tao amin’ny trano nipetrahan’ny mompera Herman, curé an’ny Ekar Beraketa Faritra Androy, Diosezy Taolagnaro, tamin’io fotoana io. Raha ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny zandary, araka ny tatitra nampitain’ny Eveka ny Mgr Rakotozafy Vincent fa hoe teo am-pisakafoana hariva niaraka tamina seminarista iray mpiara-miasa aminy ny mompera Herman no niditra an-keriny tampoka tao an-trano ireo malaso niaraka tamin’ny fitaovam-piadiana. Tafatsoaka ny mpiambina ny tanànan-dry mompera niaraka tamin’ilay seminarista mpiara-miasa aminy. Mompera irery kosa sisa no nifampitana tamin’ireo dahalo. Niharan’ny herisetran’ireo dahalo izy satria nokapain’ireo mpanafika ny antsibe ny lohany, tao amin’ny lamosiny hatrany amin’ny tongony.
Noheverin’ireo dahalo fa misy volabe…
Fotoana fohy taorian’ity fanafihana ity, vory lanonana ny fokonolona niaraka tamin’ny zandary rehefa niantso vonjy teo amin’ny manodidina ilay mpiambina sy ilay seminarista. Nentina haingana namonjy toeram-pitsaboana ao amin-dry Masera nazareanina ao amin’ny kaominina ambanivohitr’i Soanala ity mompera niharan’ny fanafihana ity. Nalaky voavonjy anefa izy ka tsy misy atahorana satria efa nahazo fitsaboana tao amin’ny masera. Tsy nisy, araka izany, ny aina nafoy na dia mafimafy ihany aza ny ratra tamin’ity fanafihana ity, araka ny filazan’ny mpiara-miasa aminy. Voalazan’ny fampitam-baovao hatrany fa noheverin’ireo malaso fa misy volabe mipetraka ao amin’ity mompera ity ka nitady io volabe io ireo malaso. Nilaza anefa ny Mompera Herman fa tsy misy volabe izany ao amin’izy ireo ka nahatonga ireo dahalo tezitra ka nikapa tamin’ny antsibe avy hatrany. Mandeha ny fikarohana ataon’ny zandary, amin’izao fotoana izao. Fantatra fa isan’ireo faritra mena amin’ny asan-dahalo ny ao Beraketa.